Iinqwelo-moya malunga nokufumana ubutyebi kwiikhredithi zakho zokuphelelwa lixesha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iinqwelo-moya malunga nokufumana ubutyebi kwiikhredithi zakho zokuphelelwa lixesha
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ukuba urhoxisile okanye utshintshe nayiphi na inqwelo moya kule minyaka mibini idlulileyo, qiniseka ukuba ubanga ixabiso lakho elingasetyenziswanga ngaphambi kokuba lihambise ixesha.
Iinqwelo-moya zihleli kwi-10 yezigidigidi zexabiso letikiti elingasetyenziswanga kwaye ngoku ixesha liyaphela kubo.
Xa i-COVID-19 iphazamise izicwangciso zokuhamba zabantu bonke. Iinqwelo-moya zandisile ukurhoxiswa kwazo kunye nemigaqo-nkqubo yokubhalwa kweencwadi.
Abahambi abaninzi abatshintshe okanye abarhoxisa inqwelomoya baneekhredithi zokuhamba ezikhutshwe ziinqwelomoya ezinokuthi ziphele ngokukhawuleza.
Nangona iinqwelomoya zithathe ubunzima ngo-2020, uninzi luza kwenza imali eninzi kubahambi abaphelelwa lixesha iikhredithi zeenqwelomoya. Ngokweengxelo, abaphathi bomoya bahleli kwi- $ 10 yezigidi zexabiso letikiti elingasetyenziswanga kwaye ngoku ixesha liphelile.
Xa i-COVID-19 iphazamise izicwangciso zokuhamba zabantu bonke, iinqwelomoya zandisile ukucinywa kwazo kunye nemigaqo-nkqubo yokubhalwa kwakhona. Baninzi abantu abatshintshileyo okanye Iinqwelo-moya ezirhoxisiweyo baneekhredithi zokuhamba ezikhutshwe ziinqwelomoya ezinokuthi ziphelelwe ngokukhawuleza. Nantsi indlela yokujonga kunye nokusebenzisa iikhredithi zakho zokuhamba ngaphambi kwexesha.
Fumana ii-imeyile zakho ezindala
Ukuba urhoxisile inqwelomoya, ubunokuthunyelwa i-imeyile yokuqinisekisa kunye neenkcukacha malunga nekhredithi yakho yokuhamba. Indlela elungileyo yokunciphisa ukukhangela kukuchwetheza igama lenqwelomoya kwibhokisi yokukhangela ebhokisini, kwaye ujikeleze apho. Ii-imeyile zihlala zibandakanya "ikhredithi yohambo" okanye "ugcino" kumgca wesifundo.
Yenza iProfayili ngeNqwelo moya
Nje ukuba uyifumane i-imeyile, kufuneka kubekho imiyalelo yendlela ongena ngayo kwiwebhusayithi yenqwelomoya kunye nencwadi yokubhala ngetyala lakho lokuhamba. Ukusuka apho uya kuba nakho ukujonga ukuba unemali engakanani kunye nokuba izakuphelelwa nini.
Tsalela umnxeba iQela leeNkonzo zabaThengi ngeeNqwelo moya
Olu khetho lunokufuna iyure okanye ezimbini kwifowuni. Ukuba awuqinisekanga ukuba unayo okanye awunayo imali yokuthenga ngetyala kunokuba ngcono ukuba uthethe nommeli weenkonzo zenqwelo moya kummeli. Ngegama lakho kunye nenombolo yoqobo yokuqinisekisa, uya kuba nakho ukusebenzisa ikhredithi oyishiyileyo.
Nje ukuba ikhredithi yakho yokuhamba iphelelwe lixesha, awuyi kubuya. Ukuba urhoxisile okanye utshintshe nayiphi na inqwelo moya kule minyaka mibini idlulileyo, qiniseka ukuba ubanga ixabiso lakho elingasetyenziswanga ngaphambi kokuba lihambise ixesha.
Ukuthi ga, United Airlines yayiyiyo kuphela inqwelo moya enkulu yaseMelika eyandisileyo ixabiso lamatikiti angasetyenziswanga ukuya kuDisemba 31, 2022.